RAAFKA SOMALIDA IYO GABAYGA RAAFKA RIYAALE EE S/LAND
Somalida ayaa waxay dhaqan u laheyd qaxootinimada (Immigration) iyo magangelydaba ( Assylum) oo ay hadda ku dhaqmaan wadamda horumaray.
Waxaana dhici jirtay qof iyo qoysas wada jira in markii ay reerkooda gudahiisa ay caadaalad-daro lagula kaco in ay la joogista reerkoodu ay ka door bidi jireen in ay qaxaan oo ay reer kale ku biireen. Markii ay u tagaan beeshaas cusubna waxaa lagu soo dhaweyn jiray gacmo furan iyo iyagoo ka mid noqon jiray beesha ayan magaca ka dhaxeynin oo la mid ah (naturalization).
Taasoo ay marqaati u tahay in qabaa'ilka qaarkood laga dhex helo reero la leeyahay asalkoodu waa reer kale, waxaa tusaale fiican u ah Ciisaha oo leh kuwa la yiraahdo waa "Asal" Iyo kuwo kale oo la yiraahdo "Soo Raac" .
Dhinaca kalena, waxaa maganta leyska saari jiray mas'uulyad gaar ah iyadoo ceeb ma harta ah ahaan jirta in magantaada hoostaada lagala baxo ama la waxyeeleeyo inta ay kula joogaan inta mar kale ay dhulkoodii kaaga noqonayaan.
Waxaan xasuustaa markii Siyaad uu ka waday xasuuqa Waqooyiga (S/Land) in odayaal reer waqooyi ah ay u carareen dhankaas iyo Garoowe. Markiibana, waxaa ka dab yimid saraakiil laga soo diray Hargeysa oo watay amarka ah in ay dadkaas nolol ama geeri midkood ay dib ugu soo celiyaan.Odayadii reer Garoowe waxay si bareer ugu sheegeen in gacan gelinta magantoodu ay ka horeeyso in iyaga horta laga takhaluso, dabadeedna rajiimkii oo halkaas ay aheyd meeshii uu xasuuqa dalka uu ka bilaabay waxay dantu ku khasabtay in iyagoo fara maran ay Garoowe iskaga tagaan si dagaal labaad iyo aag cusub ugu furmin.
Hadda ka horna Jabuuti waxaa tegay Somaali fanaaniin ah oo islahaa meesha la idinkama xigo,
wixii ay halkaas kala soo kulmeena waxay ku dhalsay in ay alifaan riwaayad ay u bixiyeen,
"Hadaadan ilko qorneyn ha ii soo qoslin". Marka Jabuuti oo Somaalida sida xun waligeedba ula
dhaqmi jirtay oo kuwa Siyaad ka soo cararana gacanta u galin jirtay ayaa waxaa la garan karaa in ceyrintii Somalida ay la aheyd arrin iska sahlan inkastoo lagu khasbay in tallaabadaas ay joojiso.
Somaliland oo ku dayaneysa Jabuuti ayaa iyaduna kala saartay Somaalidii la soo ceyrshay, ka dibna ku dhaqaaqday in ay masaafuriyaan dad ay yiraahdeen ma aha muwaadiniin?
Maamulka Waqooyiguna ma sheegin cidda ah wadani, maxaa yeelay Somalidu waxay wada degtaa Itoobiya iyo xataa S/Land oo qolo kaleba daayoo ay Sanaag ay degaan Majeerteen (Gaheyle) !
Soomana oga maamulkaas in Dr. Gaboose oo ah Qabiilka Dir uu xisbiyadeeda midkood uu ka ahaa madax ?
Haddaba, sidee bay ku dhacday in dad Dir u dhashay oo la soo musaafuriyey ay ku dhintaan duleedka Garoowe iyadoo Doktoorka aan tallaabo laga qaadin ?
Mise xaaladda waa mid u eg tii Jabuuti oo la yiri sheegadkeeduna waa wadani! Waxaa iska cad in Somaalidii ay wax badan ay ka dhuntay oo maanta keentay in dabadhilifyadii Siyaad ay meel walba hormood ka noqdaan iyagoo soo xirtay shaarar jabhadnimo.
Waxaase nasiibdarro ah in dad magac- wadaag la ah Allaha u naxariistee Xaji Faaarax Oomar oo
halheyskiisu ahaa, "Dhulkeyga wax la kala qeybiyo ka yar" in ay maanta ay diidaan somalilnimadii sida
Eedna oo xumeynta Cigaal dartiis kacaanka u aheyd ilaa Siyaad la rido oo maanta leh "Somalida muslin-nimo oo keliya ayaa naga dhaxeysa iyo kan kaba siiba liita ee la yiraahdo Waraabe ee la leeyahay xisbi buu madax ka yahay oo isaguna sheegay in reer Addis ay xigaalkiisa yihiin.
Waa Yaabe, duulkan , dadka halkeebay ku wadaan!.
Goáankaas foosha xun, waxay dhabtu tahay in Waqooyiga ay u keeni doonto dhibaato u gaar oo ay dareemi doonaan kolka xoola dhoofinta la furo oo cid xoolahooda halkaas geyneysa ay jiri doonin iyagoo heysta meel ka dhoofin jaban oo Itoobiya canshuur ka qaadin oo walibana kafiil lagaaga baahneyn.Waxaana qosol leh qolo ka mid ahaa Somalidii ku le'etay xeebaha Talyaaniga, Somalida kale waxba kaga duwaneyn raadsiga magangelyada wadamada Ferenjiga ah , daadsanna cirifyada Dunida, qaxootigoodii Itoobiya u qaxay dagaalkii dhexdooda ahaana wali joogo, labo ka mid ah barlamaankoodiina dhowaan Ingiriiska weeydiistay magangelyo in ay yiraahdaan wax ay illaa maaanta u baahan yihiin waan mamnuucnay.
Mideeda kale, waxaa si gooni ah nasiib darro uga ah reer waqooyiga in dadkii sida gaar ah xiriirka ula lahaa Siyaad ay maanta taladiisa ay ka go'do sida Riyaale iyo wasiiradiisa iyo odoyaashiisaba.
Gunaanadkiina, waxaa wanaagsan in dadku ayan maalin la nool ayan noqon kana fakiro berii iyo mustaqbalkaba, taas oo inta badan ka badbaadisa qofka in uu godob uu galo.
Tan maanta taaganna waa mid si gaar loogu heysto reerka intooda badan kala go'ida jecel inkastoo maamulkaas kooban uu madax ka yahay nin reekaas aan u dhalan.
Amuurtaan oo dad badan ay ka hadleen ayaa waxaa iigu cad caddaa nin gabayaa ah oo Hargeysa jooga oo waxii laga oran lahaaba masiibadatana ku soo qaatay gabaygiisa "Maandhoow Gar daranaa" oo aan halkaan ku leeyahay - Mahadsanid".
QORAALADII HORE EE DIRIR